Bit By Bit - Mass iskaashi - 5.2 xisaabinta Human
Mashaariicda xisaabinta Human qaadan dhibaato weyn; jebisaan burburi fudud; u soo dir shaqaale badan; oo markaas celcelis ahaan natiijada.
mashaariicda xisaabinta Human isu geeyo dadaalka ay dad badan oo ka shaqeeya fudud micro-hawlaha si ay u xaliyaan dhibaatooyinka jira impossibly weyn ee hal qof. Waxaa laga yaabaa inaad qabto dhibaato cilmi haboon xisaabinta aadanaha ah haddii aad weligaa u maleeyay: Waxaan xallin karo dhibaatadan haddii aan lahaa kun caawiyeyaasha cilmi.
Tusaale The prototypical mashruuc xisaabinta aadanaha waa Galaxy Zoo, oo aan ku tilmaami doonaa si faahfaahsan hoos ku. In mashruucan, in ka badan 100,000 oo iskaa wax u qabso lagu tilmaamay images of saabsan 1,000,000 falagyada saxsanaan la mid ah hore-iyo xooga yar-dadaalka by cirbixiyeyaasha xirfadeed. qiyaasta Tani kordhay bixisay mass hogaanka iskaashiga si ikhtiraac cusub oo ku saabsan sida falagyada u sameeyaan, oo waxay kor u soo jeestay fasalka ah gebi ahaan cusub ee falagyada loo yaqaan "Peas Green."
Inkasta oo laga yaabo in Galaxy Zoo u muuqdaan kuwo ka fog cilmi bulsho, waxaa jira xaalado dhab badan oo cilmi bulsho rabto in aad code, kala, ama images calaamad ama qoraalka. Xaaladaha qaarkood, falanqaynta this waxaa la samayn karaa by kombiyuutarada, laakiin weli waxaa jira noocyo qaar ka mid ah falanqaynta in ay adag tahay for kombiyuutarada laakiin u fududahay dadka. Waa kuwan dadka sahlan-for-weli adag-for-kombiyuutarada micro-hawlaha waxaannu u jeesanaynaa karaa in mashaariic xisaabinta aadanaha.
Ma aha oo kaliya waa-hawl micro in Galaxy Zoo arrin guud, qaab dhismeedka mashruuca waa guud iyo sidoo. Galaxy Zoo, iyo mashaariicda kale ee xisaabinta aadanaha, isticmaali kala-dalban-geeyo istaraatijiyad (Wickham 2011) , iyo mar aad fahmi istaraatijiyad this aad u yeelan doontaa in aad u isticmaali si ay u xaliyaan dhibaatooyin farabadan. First, dhibaato weyn waxaa loo kala qaybiyey badan oo doodiisa dhibaato yar. Markaas, shaqada aadanaha waxaa laga codsadaa in kasta waslad dhibaato yar, madax-bannaan oo ka mid ah doodiisa kale. Ugu dambeyntii, natiijada shaqada this lagu daro in la soo saaro xal heshiis ah. Marka la eego asalka in, aan aragno sida-dalban-isku kala istiraatiijiyada waxaa loo isticmaalay in Galaxy Zoo.